I-Best of Kashmir Tours Packages
Umqhele waseNdiya kanye nesifundazwe saseNorthernmost sezwe, iKashmir ibizwa ngokuthi 'Izulu Emhlabeni' (iBhu-swarga). Amaphakheji we-Kashmir Tour nama-Srinagar atholakale kalula ukuhlola amachibi amahle epharadesi lomuntu. Ukuvakasha kwe-Pahalgam Ukuheha amafilimu Amafilimu okudubula, noMfula wayo we-Lidder, izindawo ezihamba ngezinyawo ezinhle kanye nendlela eya ku-Amarnath Yatra edumile, ngokuqinisekile uzokwenza ihlobo lakho likhetheke. Khetha iphakethe lakho le-Kashmir elihle kakhulu njengoba ufuna futhi ungajabulela izindawo eziningi eKashmir njengeSrinagar, i-Sonamarg, i-Pahalgam ne-Gulmarg.
Srinagar - Sonamarg - Pahalgam - Gulmarg (Ama-05 Nights / Izinsuku ze-06 | Ikhodi Yokuvakasha: 094)
DAY 01: I-SRINAGAR EPHELA
Lapho ufika esikhumulweni sezindiza saseSrinagar, uzohlangana nommeleli wethu futhi uzodluliselwa ehhotela lakho lapho uzoqhubeka khona ukungena ngemvume. Ukuvakasha kwamalanga amahora ezintweni ezibalulekile eSrinagar City-Shankaracharya Temple kanye noMughal Gardens (Nishat Bagh no Shalimar Bagh). Ukulala ebusuku ehhotela.
Ngemva kokudla kwasekuseni ehhotela, ekuseni, uzobe uqhutshwa uhambo oluhambelayo lwe-Saamarg.Sonamarg (i-Meadow yeGold) - Yindawo enhle kakhulu, ihlala eSindh Valley, iqhutshwe ngezimbali, ihambele izintaba futhi zihlala endaweni ephakeme ye-2690 m ngaphezu kwezinga lolwandle. Ukuvakashelwa kaningi ngezakhamuzi, kunemuva yayo, izintaba zeqhwa ezibhekene nesibhakabhaka esicacile. Kuyindawo yokuthutha e-Alpine elinezungezile ezizungezwe nge-sycamore, i-birch yesiliva, i-fir kanye ne-pine izihlahla kanye nokuyeka ukugcina ngakwesokunxele saseKashmir ngenxa ye-drive esuka eSrinagar kuya eLeh. Futhi kuyisisekelo sezinyathelo ezithile ezithakazelisayo eziya endaweni ephakeme yamaLwandle e-Himalayan. Emva kokudla kwasemini endaweni yokudlela yasendaweni, yondla amakhamera akho ngesithombe sombukwane omuhle kakhulu wezintaba. Ungakwazi ukujabulela ukuhamba ngehhashi ku-Sonamarg (Okokuzithandela). Ntambama ibuya eSonamarg iya eSrinagar. Ubusuku buhlale ehhotela.
Ekuseni emva kokudla kwasekuseni, hlola esitokisini sezindlu bese uhamba waya ePahalgam, uvakashela emasimini eSafron amasimu asePampora, ubone indawo enhle yezwe, amasimu amaningi elayisi nama-Awantipura amanxiwa endleleni.
Kamuva qhubeka uhambo lwakho oluya ePahalgam (Valley of Shepherds) ngokusebenzisa ihlathi lephayini, i-confluence yemifudlana egeleza esuka emfuleni i-Lidder neSheshnag Lake edume ngobuhle bawo obuhle.
Emva kokudla kwasemini endaweni yokudlela yasendaweni, qhubeka uhamba ngezinyawo futhi ukondle amakhamera akho ngesithombe sobuhle obuphakeme bezintaba. Ungakujabulela ukugibela ihhashi ku-Pahalgam. (Okokuzithandela).
Ukulala ebusuku ehhotela e-Pahalgam.
Ekuseni emva kokudla kwasekuseni, hlola ehhotela bese uqhubekele i-drive enhle kakhulu ukuya eGulmarg. I-Gulmarg (I-Meadow yeGold) - Itholwe njengendawo yokuvakasha yiBritish ngekhulu le-19th. Ngaphambi kwalokho, ababusi baseMughal bavakashela esigodini saseGulmarg esingaba ngu-03 ubude obude nokuphakama kwe-01 km.
Lihle kakhulu emgodini wepine ozungezile wezintaba zePir Panjal endaweni ephakeme ngamamitha angu-2,730 ngaphezu kolwandle nolunye lwezivakashi ezidumile kunazo zonke zokuvakasha zaseKashmir. Ibuye ibe neyodwa yezinhlayiya zegalofu eziphezulu kakhulu zezwe ezinezicucu ze-18, kanye ne-clubhouse, okuyinto yesakhiwo esingokomlando ngokwayo. Umuntu angajabulela ukugibela i-Gondola noma ukugibela amahhashi eGulmarg. (Okokuzithandela)
Ukuze ugijime ngendlela ejabulisayo yenhlobo engavamile kakhulu, ukuphakama kukaGulmarg okwakhiwa kabusha kwe-gondola kusuka phezulu ngenhla kweGulmarg, ngokusebenzisa imithangala ye-pine-clad iyamangalisa. Kusuka eGulmarg, ithrekhi ye-pony iholela phezulu ukuya eKhilanmarg, Kangdori kanye nemithombo yamanzi ayisikhombisa, amahora ambalwa nge-pony isikhathi eside ngezinyawo.
Ukulala ebusuku ehhotela eGulmarg.
Ekuseni emva kokudla kwasekuseni, hlola ehhotela bese uya eSrinagar. Lapho ufika, hlola ku-Houseboat bese ujabulela ukuhamba eShikara ngokuzilibazisa (Okokuzikhethela) echibini - Yisinye sezici ezithokozisa kakhulu neziphumuzayo zeholide eKashmir.
Ukulala ebusuku kusikebhe saseSrinagar.
DAY 06: I-SRINAGAR - UKUPHELA KWEZINDAWO
Ekuseni emva kokudla kwasekuseni, hlola ehhotela futhi kamuva uzodluliselwa esikhumulweni sezindiza saseSrinagar ngesikhathi sokugibela indiza eya ekhaya.